Arbaco, Luulyo, 7, 2021 (Wararka-Maanta) – Wasiirka warfaafinta Galmudug, Axmed Shire Falage, ayaa beeniyay in kooxda Alshabaab ay dib ula wareegtay degmada Bacaadweyn ee gobolka Mudug, halkaas oo maalmo ka hor ciidamadu gudaha u galeen.Wasiirka warfaafinta Galmudug, oo BBC Somali la hadlayay, ayaa sheegay in ciidamada ay ku sugan yihiin magaalada bannaankeeda, islamarkaana ujeedada laga leeyahay ay tahay in aan shacabka la argagax galin oo magaaladu aysan noqon goob ciidan.
Wasiir Falagle wuxuu sheegay in ay ciidamada u diideen in magaalada gudaha u galaan iyagoo hub sita, wuxuuna sheegay in kaliya loo ogol yahay masuuliyiinta dowladda iyo saraakiisha.
Wuxuu sheegay Galmudug in ay ka go’an tahay in magaalo kaste iyo deegaan kaste oo la xoreeyo loo sameyn doono maamul islamarkaana aysan hadda kadib dhici doonin in la dayaco magaalo la xoreeyay.
Alshabaab ayaa baahiyay maalintii shalay in ay dib ula wareegeen magaalada Bacaadweyn iyo deegaano kale, iyagoo sheegay in ay 20 askari ku dileen dagaaladii ka dhacay Bacaadwayn iyo aagga Wisil.
Al-Shabaab oo war kasoo saaray dagaalkii Bacaadweyn, soona bandhigay s…
Wararka Maanta : Deg Deg: MD Farmaajo oo Dhoolatus culus soo bandhigay, Jawaata Xasan Sh &...
Muqdisho (Wararka Maanta) – Madaxweynaha Maamulka HirShabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa ku guul dareestay in uu ka qeybgalo shir u dhaxeeyay qaar ka mid ah odoyaasha dhaqanka degmada Cadale iyo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud.
Sabti, Luulyo, 24, 2021 (Wararka-Maanta) – Bandhigii 14aad ee Bandhiga Caalamiga ah ee Bugaagta Hargaysa, ayaa maanta si rasmi ah uga furmay Xarunta Dhaqanka ee Hargaysa, sanadkan waxa bandhiga marti ku ah dalka Itoobiya, halku dhaga sanadkuna waxa weeyaan “jaarnimo”.Agaasimaha Xarunta Dhaqanka ee Hargaysa oo sidookale ah agaasimaha Bandhiga Caalamiga ah ee Bugaagta Hargaysa Jaamac Muuse Jaamac, ayaa soo dhaweeyay dhamaan qoraayada iyo martida kala duwan ee ka qayb galaysa bandhiga.
“Somaliland iyo Itoobiya waxay leeyihiin xidhiidh dheer oo dhaqaale, amni, bulsheed iyo dhaqan, bandhigyadan oo kale waxay sii xoojinayaan xidhiidhka labada bulsho, waxayna furayaan gole wax lagu falan qeeyo” ayuu yidhi.
“Waxa sharaf inoo ah in dadku bilaabeen in ay wax qoraan, oo bugaag la qoray, taasi oo ah horumar aynu ku talaabsanay, waxa kale oo sharaf inoo ah in aynu buugaagta laftooda saxno, oo aynu eegno in ay yihiin kuwo bulshada isku soo dhawaynaya oo wax usoo kordhinaya” ayuu yidhi.
Madaxweyne kuxigeenka Somaliland Cabdiraxman Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, ayaa sheegay in bandhigani keenayo is dhexgal bulsho, waxaanu sheegay in “jaarnimo” oo ah halku dhaga sanadka uu yahay wax Islaamku qiimeeyo.
“Jaarnimadu guriga kugu xiga ayay ka bilaabanta, sidaa ayay u socotaa ilaa waddanka aad jaarka tihiin, waana wax Islaamku dhiirigaliyay, waxaynu u soconaa in isdhexgalka la xoojiyo oo laga bilaabo dalba dalka uu ku xigo” ayuu yidhi.
Wararka Maanta : Wararkii ugu Danbeeyey Koonfur Afrika Boobka & Dhaca Soomaalida Kusocda...